गुगलले अन्ततः बन्द गर्यो गुगल एडसेन्स - Muldhar Post
गुगलले अन्ततः बन्द गर्यो गुगल एडसेन्स
पत्रपत्रिका खबर २०७७, १४ बैशाख आईतवार
गुगलले अन्ततः Adsence App बन्द गरेको छ । गत वर्ष नै बन्द गर्ने घोषणा गरिएको Ad sense एप गुगलले बल्ल आएर बन्द गरेको हो । गुगलले एडसेन्सका प्रयोगकर्तालाई इमेल पठाउँदै एडसेन्स एप बन्द भएको आधिकारिक जानकारी गराएको खबर अनलाइन खबरमा समाचार छ ।
बन्द गरेसँगै अब यो एप प्लेस्टोर तथा एप्पलको एपस्टोरबाट हटिसकेको छ । यद्यपि क्रोम तथा सफारी प्रयोगकर्ताले अहिलेसम्म ब्राउजरको होमस्क्रिनमा उक्त एप जोड्न सक्दछन् ।
के हो एडसेन्स एप ?
शायद तपाईंलाई गुगलको Ad Sense एपका बारेमा थाहै छ होला । गुगलका अनुसार एडसेन्सका माध्यमबाट विश्वसनीय विज्ञापनदाताले वेबसाइटहरुमा विज्ञापन देखाउँदछन् । प्रकाशित सामग्री जतिधेरै लोकप्रिय बन्यो प्रकाशकलाई उति नै धेरै आम्दानी हुन्छ । वास्तवमा सर्जकहरुका लागि यो एउटा आम्दानी सिर्जना गर्ने टूल्सको रुपमा रहेको थियो ।
किन बन्द गर्‍यो ?
अब सबै प्लाटर्फमका लागि एउटा साझा वेब एप्लिकेसन सपोर्ट ल्याइने र त्यसमा मोबाइल प्रयोगकर्ताका लागि अप्टिमाइज्ड एडसेन्स फिचर्स उपलब्ध हुने गुगलको भनाई छ । एजेन्सीकेा सहयोगमा
नेपाल टेलिकमले बनायो डाटा
फेसबुकले प्रयोगकर्तालाई पैसा बाढ्दै
यसरी थाहा पाउनुहोस् तपाइले
नेपाल टेलिकमले ल्यायो फेरी